Fiompiana fizahan-tany any Kroasia miaraka amin'ireo mpitsidika frantsay sy amerikana nahazo alalana avy amin'i Russia
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fiompiana fizahan-tany any Kroasia miaraka amin'ireo mpitsidika frantsay sy amerikana nahazo alalana avy amin'i Russia
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Kroasia dia miaina fisondrotana ary fiakarana 300% amin'ny fikarohana fitsangatsanganana an-tserasera, noho ny World Cub farany teo sy ireo firenena mandray anjara ao Russia.
Tsy ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab ihany no mahalala fa ny fanatanjahan-tena no fampiroboroboana tsara indrindra ny fizahantany. Nanendry kintana baolina kitra i Zurab ho masoivohon'ny fizahan-tany. Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Kroasia dia miaina fisondrotana ary fiakarana 300% amin'ny fikarohana fitsangatsanganana an-tserasera, noho ny World Cub farany teo sy ireo firenena mandray anjara ao Russia.
Ny firoboroboan'ny fizahantany dia voamarina noho ny rivo-piainana tsy mampino niely nanerana ny firenena nandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany tany Russia.
Ny fizotran'ny fizahan-tany dia tsapa manerana an'i Kroasia, fa koa any Frantsa, any UK sy Russia. Ny birao fizahan-tany any Croatia dia mifantoka amin'ny World Cub rehefa mampiroborobo ny firenena ho an'ny mpizahatany, ary miasa izy io. Ny vokatra fizahan-tany any Kroasia dia misy ny enogastronomy ho an'ny fizahan-tany an-dranomasina sy mavitrika ary ny fampiasan'ny atleta Kroaty ho Ambasadaoron'ny Fizahan-tany Kroaty miaraka amin'ny teny filamatra vaovao “Kroasia, feno mpilalao mahay.” Ity slogan ity dia natomboka nandritra ny World Cub tany Russia.
Ny fanatanjahan-tena dia midika ho fisakaizana. Ny mpizahatany frantsay dia tafakatra 10 isan-jato raha oharina tamin'ny taon-dasa ary tondra-drano mankany Zagreb, Slavonia, Istria, na Kvarner. Manamora izany ny serivisy mivantana mivantana avy any Frantsa mankany Kroasia.
Ny SETO French Travel Association dia nandrakitra fiakarana 21% amin'ny famandrihana fahavaratra ho an'i Kroasia raha oharina tamin'ny 2017.
Ny mpizahatany frantsay dia manatevin-daharana ireo mpitsidika rosiana, izay tafakatra 20% ihany koa, ary ny fahavalony dia mihabe ihany koa ny Amerikanina noho ny fanaovana dokambarotra tsara sy ny fanentanana an'i Kroasia. Fisondrotana 25% amin'ireo mpitsidika amerikana dia vaovao tsara.
Konferansa fitarihana ofisialy nasionaly voalohany an'ny UK: antsipiriany